Entana sarobidy maro iray kamio tokony ho any Antsiranana ity nizotra nankany amin’ny lalam-pirenena faha-7 ity. Ny 8 oktobra teo no nitondra entam-barotra mampisalasala tamin’ny lalam-pirenena faha-7 io fiarabe io. Olona tsara sitrapo no nanome vaovao ny zandarimariam-pirenena. Voalaza tamin’izay fa tsy nisy tompony ireo entana ka ny fiara no voasakana teo Ambatolampy, faritra Vakinankaratra.
Tratra tamin’izany ny entana lafo vidy maro tsy nahitana taratasy tahaka ny môtô iray, vata fampangatsiahana roa, baoritra 42 feno lovia, baoritra 127 izay fonosana « careaux » sy 136 singa, seza plastika miisa 177, nahitana fonosana 7 ana valindrihana mangirana vita tamin’ny plastika, loko tamin’ny boaty mitotaly 33 sy loko 150 isa anaty sase miaty 10 litatra, fantsona 42, siny plastika 705, koveta 612, fasiana lamba 39 sy entana maro hafa.
Araka ny tafa manokana nifanaovana tamin’ny kaompanian’ny zandarimariam-pirenena, hiakatra fampanoavana ato ho ato ny raharaha. Efa miha mazava ihany koa ny taratasin’ireo entana ireo nony tonga ny tompony, saingy mbola fanina hatrany ity farany amin’ny fihodinkodinan’ny entam-beny toy izao izay mitentina an-tapitrisany ariary maro no tratran’ny tamberintanin’ny halatra.